Nampahafantarin’ilay tanora mpikatroka Azerbaijaney ampahibemaso ny heloka bevava nihatra taminy ary mbola mandehandeha ny nahavanon-doza · Global Voices teny Malagasy
Tantarain'ilay feminista mpikatroka 17-taona ao amin'ny Facebook ny tranga
Voadika ny 21 Oktobra 2021 4:13 GMT
“Sarin'ny tena maneho ny tahotra ratran-tsaina, fanararaotana ara-pihetseham-po, ara-tsaina, ara-piraisana ara-nofo, ara-batana, herisetra am-bava any an-tokatrano fanolanana vady Trauma PTSD, Sary fanehoana ny tena, Runjaneoks, #janeoks ity aho. #Domesticviolence #stopdv #spousalrape #dv #hearmystory” nataon'i Run Jane Fox nahazo lisansa CC BY-ND 2.0
Naolan'ny lehilahy iray havany ihany i Sanay Yaghmur, 17 taona, mpikatroka feminista Azerbaijaney sady mpitantana ny sehatra feminista malaza femkulis tamin'ny 25 aogositra 2020. Na teo aza ny fisian'ireo antontan-taratasim-pitsaboana manaporofo fa natao ny heloka, dia mbola mirehareha any ilay nahavanon-doza, Asgar Agayev, 29 taona , araka ny kaonty manokan'ilay mpikatroka.
Ankehitriny, herintaona mahery taty aoriana, nitondra ny tantarany manokana tao amin'ny Facebook i Yaghmur, izay hamaritany amin'ny antsipiriany ny zavatra niaretany, ary manondro ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana ho tompon'andraikitra tamin'ny tsy nahavitana ny famotopotorana sy ny fiampangana ilay nahavanon-doza.
Milaza ny antsipiriany momba ny zava-nitranga tamin'ny Aogositra 2020 ny lahatsoratra Facebook navoakan'i Yaghmur tamin'ny 13 Oktobra:
Reko naneno ny findaiko tamin'ny maraina fa tsy afaka nihetsika mihitsy aho nandritra ny folo na dimy ambin'ny folo minitra. Tsy azoko koa hoe taiza aho. Fotoana kely taty aoriana, namory ny heriko aho, ary rehefa nanandratra ny lohako aho, dia hitako, izy, Asgar Agayev nandry teo akaikiko. Ny tadidiko mazava tsara tamin'izany dia ny fanaintainana sy rà.
Notohizan'i Yaghmur ny fomba nanakanan'ilay lehilahy havany azy tsy hivoaka ny trano, izay an'ny nenitoany. Nandeha tany amin'ilay trano i Yaghmur ny alina talohan'io, raha andeha hody izy, dia noresen'ny reniny lahatra fa tsy tokony hody fa mijanona any an-tranon'ny nenitoany satria efa hariva ny andro ary akaiky ny trano onenan'ilay nenitoany ao an-tanàna.
Afaka adiny iray teo, dia afaka nandeha aho. Tsy maintsy nandresy lahatra azy aho, tsy hiresaka na amin'iza na amin'iza aho (nandainga fotsiny aho mba hahafahako mandeha. Raha tsy izany dia tsy ho tanteraka izany). Raha vao handeha aho, dia nilaza tamiko izy mba tsy hody fa hariva ny andro, ary tsy hilazalaza amin'olona fa hiverina eto.
Niafina i Asgar Agayev taorian'ny zava-nitranga. Notazonin'ny fianakaviana tsy ho hita izy nandritra ny efatra andro, araka ny tantara nozarain'ny renin'i Sanay Yaghmur, Zumrud Yaghmur tamin'ny Global Voices.
“Rehefa nanenjika ny raharaha i Sanay, dia niezaka nifampiraharaha taminay ny fianakaviana ary nitalaho famindram-po. Nangataka izy ireo mba hanova ny fitoriana ho herisetra ara-batana fa tsy fanolanana,” hoy i Zumrud Yaghmur tamin'ny Global Voices. “Nilaza mihitsy aza izy ireo fa handamina fanambadiana.”
Misy ambadika politika?
Niezaka hanao kendaroroka tamin'i Yaghmur mihitsy ny fianakaviana, milaza fa nisy horonantsary. “Fantatray tamin'ny farany fa tsy nisy horonantsary akory,” hoy i Zumrud Yaghmur, izay mino fa misy ambadika politika ireo fihetsika ireo. “Manaporofo ny herisetra ara-nofo nihatra tamin'i Sanay sy ny fiarovan'ny sampan-draharahan'ny mpampihatra lalàna fa na efa nomanina mialoha na navadika ho valifaty politika ny zava-nitranga.”
Roa andro taty aoriana, nanery ny fiampangana i Yaghmur. Nofaranan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna indroa ny raharaha, noho ny porofo tsy ampy. Na teo aza ny fanoloran'ilay niharam-boina tatitra ara-pitsaboana telo farafahakeliny manamarina ny fanolanana.
Tsy maintsy dinihina amin'ny fomba mahaleotena sy ara-dalàna ny heloka bevava vitan'i Asgar Agayev raha tsy maintsy raisina ho tompon'andraikitra ny andrim-panjakana manohana azy amin'ny fanarontsaronana ny asa ratsy – dia ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny faritra Yasamal.
Ny tanjon'i Yaghmur amin'ny fizarana ampahibemaso ny zavatra niainany, dia ny hahazoana antoka fa nohadihadiana araka ny tokony izy ny raharaha. Tamin'ny 11 Oktobra 2021, nanapa-kevitra hanao ny famotorana indray ny raharaha nampiakarina ny fitsarana ambony.
Nampiseho hafatra fanohanana avy hatrany ilay mpikatroka sy mpiaro ny zon'ny vehivavy, Yaghmur.
Raha mbola mandehandeha an-kalalahana i Asgar Aghayev, izay nanolana an'i Sanay Yaghmur, tsy maintsy niandry fotoana ela kosa ny namako mba hampahafantatra ampahibemaso ny tranga fampijaliana azy mba tsy hampidi-doza ny fianarany.
Namoaka fanentanana ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpikatroka ho an'ny daholobe mitaky ny hanasaziana ilay nahavita herisetra ara-nofo tamin'i Sanay Yagmur. Raha hijery bebe kokoa : https://t.co/YjIH0icDYs?amp=1
Mitaky ny rariny ho an'i Sanay Yagmur aho! Tsy te hiaina ao amin'ny firenena izay mandehandeha an-kalalahana ireo mpanolana zaza tsy ampy taona!
Nilaza tamin'ny Global Voices ny renin'i Yaghmur, Zumrud Yaghmur fa nandritra ny famotorana, nampiasaina hanoherana azy ny fikatrohan'ny zanany vavy.
“Nokendrena izy satria mpiaro vehivavy. Nilaza ireo mpanao famotorana fa tsy mendrika ny fomba fiainany. Nampiasain'izy ireo hanoherana azy ny sarin'ny zanako vavy nandritra ny fihetsiketsehana nokarakaraina tao anatin'ny taona vitsivitsy ho fanohanana ny fitovian'ny miralenta sy ny zon'ny vehivavy,” hoy i Zumurd Yaghmur.
Nilaza ihany koa ny renin'ity mpikatroka mafàna fo ity fa nanakana azy ireo tsy hanao fanambarana ny raharaha mialoha ny toe-draharaha.
“Iray volana taorian'ny tranga dia vonona izahay hizara ny zava-nitranga tamin'i Sanay,” hoy i Zumrud Yaghmur. “Niresaka tamin'ny mpanao gazety iray teo an-toerana izahay, saingy andro iray taty aoriana dia nanomboka ny ady teo amin'i Armenia sy Azerbaijan ka voatery niandry izahay. Tamin'ny volana martsa 2021 dia nahazo taratasy fandraisana an'i Sanay avy amin'ny oniversite any Riga hanohy ny fianarany momba ny lalàna. Nanapa-kevitra izahay fa hiandry mandra-pivoakany ny firenena alohan'ny nivoahany ho fanta-bahoaka tamin'ity raharaha ity. “
Nandao an'i Azerbaijan i Sanay Yaghmur tamin'ny volana septambra 2021 hanohy ny fianarany ao amin'ny Riga Graduate School of Law.
Afa-maina matetika ireo mpanararaotra fanolanana
Araka ny lalàna nasionaly, ny fanolanana dia mety hampigadra 15 taona an-tranomaizina. Matetika anefa dia mandeha malalaka ireo nahavanon-doza. Amin'ny kolontsaina iray, izay olana raiki-tapisaka ny herisetra sy ny fanorisorenana atao amin'ny vehivavy sy tsy nahitana fivoarana firy [mg] dia tsy atao hahagaga izany.
Tamin'ny fanambaràna navoaka ny 28 Jona, Dubravka Šimonović, Iraka Manokana manokana momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona nilaza fa: “Ny fanolanana dia matetika tsy voalaza, ary na voatatitra aza, dia tsy ahenoana fitoriana loatra. Fa na dia misy aza ny fanenjehana, dia (toa tsy misy firaharahiana loatra ny vavy) ary matetika mbola lasibatra indray ny lasibatra fa mahavokatra fanamelohana vitsy. Lasa fenitra ho azy ny fanolanana, ny kolontsaina fanolanana na fahanginana amin'ny fanolanana, fanilikilihana ireo niharam-boina ary ny tsimatimanota ho an'ireo nahavanon-doza. “
Na teo aza ny fandrotsahana hafatra fanohanana sy firaisankina, niatrika fanilikilihana maro i Yagmur saingy ny habetsaky ny herim-po nitondran'ny mpikatroka mafana fo azy hizara ampahibemaso ny tantarany, miresaka hoe tahaka ny ahoana ny hamaroan'ny herisetra, fanafihana, sy fanorisorenana atrehin'ny vehivavy no tsy maintsy hanaovana izay handrenesana ny feon'izy ireo ao Azerbaijan.